Taona 2011 - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
Hafatra avy amin’ny pasitera Mailhol ho fiarahabana ny fiangonana sy toromarika (audio) :
Miarahaba antsika nahatratra ity taona vaovao 2012 ity. Enga anie mba samy hahita fahombiazana isika ary mba ho samy hahatafita ity taona ity. Hanomboka ny sabata 07 Janoary ho avy izao ny fifadian-kanina 40 Sabata izay fanaon’ny fiangonana. Marihina fa izay nanomboka tamin’ny taona 2007 dia mifarana amin’ity taona ity ny 7 taona nanaovana izay hazakazaka izay. Toy ny tamin’ny taona lasa ihany koa dia misy ny perikopa izay hiarahan’ny Fiangonana Apokalypsy rehetra.
Ankoatra izay dia hisy ihany koa ny fihaonam-be rezionaly voalohany amin’ity taona ity. Ny sabata 07 Janoary 2012 ho avy izao no hanatontosana izany etsy amin’ny fiangonana Apokalypsy Ambohimarina Itaosy. Fotoana izay hiarahana amin’ny Ray aman-dReny pasitera Mailhol sy ny ankohonany. Io fotoana io ihany koa no hifampiarahabana noho ny nahatrarana ny taona 2012. Hisy ihany koa ny firaisana latabatra amin’ny Tompo amin’izany.
Fantatra ihany koa fa hisy ny kaoferansa lehibe iarahana amin’ny pasitera Mailhol ny Alahady 08 Janoary 2012 ho avy izao. Etsy amin’ny foibe Apokalypsy Ambodinisotry no hanatontosana izany, izay hanomboka amin’ny 09 ora maraina ka mandrapaharivan’ny andro. Hiverina kosa izany ny Alarobia sy Alakamisy ary Zoma samy amin’ny 05 ora hariva. Io fotoana io no hitondran’i pasitera Mailhol vahaolana hialana amin’ny fatoran’ny zava-mahadomelina toy ny toaka, sigara, paraky, rongony , fialana amin’ny tsy fisiana ara-bola sy ny aretina maro samihafa izay tsy sitram-panafody. Fanazavana ara-matematika, fizika ary siansa ny baiboly kosa no hitondrany izay vahaolana izay. Marihina fa ny olona rehetra dia afaka mahazo ity fanazavana ity avokoa fa tsy natokana ho an’ny manam-pahaizana ihany izany.
AMBOHIMARINA 31 Décembre 2011
“Ala nenina farany ho antsika ity taona 2012 ity. Izay tsy miorina, tsy mibebaka ary tsy mamoa voa dia tsy hahatratra ny 2013.” Io no nisongadina tamin’ny toriteny izay noentin’ny ray aman-dreny pasitera Mailhol tetsy amin’ny Fiangonana Apokalypsy Ambohimarina Itaosy ny sabata 31 Desambra 2011 lasa teo. Mbola nohamafisiny ihany koa izay teny izay tamin’ny nivahinianany tao amin’ny radio Fanambarana ny alin’ny 31 Desambra. Ho mafy hoy izy ny taona 2012 kanefa raha manantena an’Andriamanitra isika dia tsy maintsy ho tafita. Mandritra ny azakazaka amin’ity taona ity dia ny teny faneva no ho fampaherezana antsika : “Fa raha mbola hisy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao”. Ohab 23:18.